» षडज् राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग २
षडज् राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग २
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १९:३१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १६ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को दोस्रो राउण्ड अर्थात षडज् राउण्डको दोस्रो भागबाट १२ जना प्रतियोगीहरु तेस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भागमा प्रस्तुति दिएका २७ जनामध्ये १२ जना प्रतियोगीहरु अर्को राउण्डका लागि छानिएका हुन् । यस भिडियो सामग्रीमा हामी षडज् राउण्डको दोस्रो भागमा कसले कस्तो प्रस्तुति दिए ? को छानिए अनि को बाहिरिए भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । नेपाल स्टारको अन्य राउण्ड तथा प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
षडज राउण्डको दोस्रो भागमा पहिलो प्रस्तुति नविन्द्र राईले दिएका थिए । उनले गोपाल योञ्जनको आवाजमा रहेको ‘देशले रगत मागे’ बोलको गीत गाएका थिए । निक्कै नै राम्रो गीत गाएका उनलाई निर्णायकहरुले ताली बजाएर प्रशंसा गरेका थिए । उनमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि रहेको निर्णायकहरुले बताए । दोस्रो राउण्डमा उजयकुमार सहनीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले योगेश्वर अमात्यको आवाजमा रहेको ‘लैजा चरी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले सुरमा केही सुधार गर्नुपर्नेमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए । तेस्रो प्रस्तुति दोर्जे तामाङले दिएका थिए । उनले नरेन लिम्बुको आवाजमा रहेको ‘भन्न आउँदैन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुले खुशी व्यक्त गर्दै उनको निक्कै राम्रो प्रस्तुति रहेको बताएका थिए । उनी धेरै अगाडि जानसक्ने र सुनिरहँदा आनन्द महशुस भएको समेत निर्णायकहरुले बताए । उनलाई निर्णायकहरुले अघि बढ्नका लागि शुभकामना समेत दिएका छन् । त्यस्तै षडज् राउण्डको दोस्रो भागमा चौथो प्रस्तुति शिव बिकले दिएका थिए । उनले राजु लामाको आवाजमा रहेको ‘मेरो नेपाल’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा सुर र हाईनोटको सुधार जरुरी रहेको निर्णायकहरुले बताए । तर उनको बेस भ्वाईस निक्कै राम्रो लागेको निर्णायकहरुले बताए । उनको प्रस्तुतिहरु अडिसन राउण्डमा भन्दा राम्रो भएको समेत निर्णायकहरुले बताएका छन् । दोस्रो भागको पाँचौँ प्रस्तुति अर्का चर्चित प्रतियोगी श्रेया नेपालले दिएकी थिईन् । उनले दिक्षिता कार्कीको ‘तिमी र म’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुति राम्रो लागेको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका छन् । उनको प्रशंसामा निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । छैटौँ प्रस्तुति विशाल देव श्रेष्ठले दिएका थिए । उनले ओम बिक्रम विष्टको ‘म मौनतामा’ बोलको गीत गाएका थिए । निक्कै नै राम्रो प्रस्तुति दिएका विशालको प्रस्तुति पश्चात उनको प्रशंसामा निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । उनको प्रस्तुति धेरै राम्रो भएको भन्दै निर्णायक आलोक श्रीले आफु उनको फ्यान भएको बताएका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
दोस्रो भागको सातौँ प्रस्तुति सुदृष्टि राईले दिएकी थिईन् । उनले मुग्लान चलचित्रको ‘आज बाह्र हाते पछ्यौरी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । सुदृष्टिको आवाज सुनेर निर्णायकहरु निक्कै खुशी भए । निर्णायकहरुले उनको मेलोडी, शब्द उच्चारणको प्रशंसा गर्दै संगीतले एउटा गायिका पाएको बताए । उनको अनप्लग्ड भर्सनको निक्कै तारिफ गर्दै निर्णायकहरुले आगामी दिनमा अझै अगाडि बढ्न शुभकामना दिएका छन् । आठौँ नम्बरमा निशान बरालले प्रस्तुति दिएका थिए । निशानले दिपक खरेलको ‘तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति राम्रो भएता पनि केही रियाजको पनि आवश्यकता भएको बताएका थिए । यस भागको नवौँ नम्बरमा अमिन परियारले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नाईन्टिन सेभेन्टी फोएडीको ‘सम्बोधन’ बोलको गीत गाएका थिए । अमिनको प्रस्तुति राम्रो भएको र आवाजको क्लियारिटी राम्रो भएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए । साथै उनका केही सुधार्नुपर्ने कुराहरु पनि निर्णायकहरुले बताएका थिए । त्यस्तै यस भागको दशौँ नम्बरमा समिर खरेलले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले भक्तराज आचार्यको मलाई मेट्न देउ बोलको गीत गाएका थिए । निक्कै नै अप्ठ्यारो गीत गाएका समिरका केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए । एघारौँ नम्बरमा अर्का प्रतियोगी एलिना गुरुङले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले एज ब्याण्डको ‘नचाहेको होईन तिमीलाई’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । राम्रो प्रस्तुति दिएकी एलिनाको प्रशंसा गर्दै निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । उनको प्रस्तुतिले गर्व महशुस भएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको आवाजको प्रशंसा गरेका थिए । यस एपिसोडको बाह्रौँ प्रस्तुति चन्द्रबहादुर पुनले दिएका थिए । उनले मञ्जरी चलचित्रको ‘दैव हे’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले हाई रेञ्जमा गाएका कारण निर्णायकहरुले त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै यस भागको तेह्रौँ नम्बरमा विजयकुमार दंगालले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले रोबिन शर्माको आवाजमा रहेको ‘कुन मन्दिरमा’ बोलको गीत गाएका थिए । विजयले सारै मिठो गाएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए । उनले लिएका खिट्काहरुको चर्चा गर्दै उनले लो स्केलमा अलि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस भागको चौधौँ नम्बरमा सुमित पौडेलले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले भक्तराज आचार्यको ‘हजार सपनाहरुको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाजको निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए तर उनको टाईमिङहरुमा सुधार्नुपर्नेमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए । पन्ध्रौँ नम्बरमा मुना ठटालले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले उदितनारायण झाको आवाजमा रहेको ‘मेरो मनको ढुकढुकी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । निर्णायकहरुले उनको प्रस्तुतिको प्रशंसा गरेका छन् । त्यस्तै सोह्रौँ नम्बरमा प्रतियोगिताकी अर्की चर्चित प्रतियोगी तारा थापाले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले सञ्जीवनीको आवाजमा रहेको ‘डाँडापाखा छाहारीले’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुति राम्रो भएको भन्दै निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका छन् साथै उनका केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा पनि निर्णायकहरुले जोड दिएका छन् । यो भागको सत्रौँ नम्बरमा मनिशा रानाले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले योगेश काजीको ‘दैव हे’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए । यस भागको अठारौँ नम्बरमा मिलन खपाङ्गीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गुलाम अलिको आवाजमा रहेको ‘लोलाएका ति ठूला’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाज मिठो भएता पनि नोटहरुमा समस्या भएको निर्णायकहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै षडज राउण्डको दोस्रो भागको उन्नाईसौँ नम्बरमा रोहन श्रेष्ठले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले श्याम कार्कीको आवाजमा रहेको ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ बोलको बहुचर्चित गीत गाएका थिए । उनको आवाज मिठो भएको भन्दै निर्णायकहरुले नोटहरुमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । यस भागको बिसौँ नम्बरमा पारश थापाले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले दिप श्रेष्ठको आवाजमा रहेको ‘मेरो आँखामा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुका बारेमा निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि एक्काईसौँ नम्बरमा निशा कार्कीले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले सिने गुरुङको ‘मेरो प्यारो’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिपश्चात निर्णायकहरुले के भने त्यो भने कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यस्तै बाईसौँ नम्बरमा दिपिका बस्नेतले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले सविन राईको ‘नमूना’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा निर्णायकहरुले उनलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि तेईसौँ नम्बरमा अंकित लुईटेलले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले एड्रियन प्रधानको ‘मुटुभरी भरी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको गायन र मुडको निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । चौबिसौँ नम्बरमा सोहिल साहुले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले द एज ब्याण्डको ‘जिउनलाई गाह्रो भो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले गीतमा केही सुधार गर्नुपर्ने बारेमा निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै षडज राउण्डको दोस्रो भागको पच्चिसौँ नम्बरमा प्रतियोगिताकी अर्की चर्चित प्रतियोगी लावनी चक्रवर्तीले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले श्रेया घोषालको आवाजमा रहेको ‘छाएछ बसन्त’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । लावनीको प्रस्तुति राम्रो भएका कारण निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका छन् । साथै केही सुधारको पनि जरुरी रहेको निर्णायकहरुले बताएका छन् । त्यसपछि छब्बिसौँ नम्बरमा सागर हमालले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले मनिश ढकालको आवाजमा रहेको ‘परदेशी नभन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको गायन कला राम्रो भएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए । सत्ताईसौँ नम्बरमा शंकर योङहाङले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नाईन्टिन सेभेन्टी फोएडीको ‘छुँदैन तिम्रो मायाले’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति राम्रो भएको भन्दै निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । उनले गीतलाई धेरै हदसम्म राम्रो निभाएको निर्णायकहरुले बताए । यी २७ जना प्रतियोगीहरुमध्ये लावनी चक्रवर्ती, विशाल देव श्रेष्ठ, सागर हमाल, समिर खरेल, सुदृष्टि राई, एलिना गुरुङ, दोर्जे तामाङ, श्रेया नेपाल, अमिन परियार, विजयकुमार दंगाल, मुना ठटाल र शंकर योङहाङ तेस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । त्यस्तै १५ जना प्रतियोगीहरुभने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।